Nethezeka ku-Retro Open-Air Living at Lucy, Ngisekhaya - I-Airbnb
Nethezeka ku-Retro Open-Air Living at Lucy, Ngisekhaya
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Acme
P.S. I-ID yedolobha #2944 Umqashi oyinhloko kufanele okungenani abe neminyaka engama-25 ubudala
I-retro vibe enhle kakhulu nazo zonke izinsiza zesimanje. Indawo yangaphandle yokubukwa kwe-w/mtn, ichibi elishisayo eline-spa yempophoma ehlanganisiwe, izindawo zokuhlala eziningi/zokudlela, isici somlilo, ikhishi elingaphandle. Kufakwe isango futhi kubiyelwe ngodonga ukuze kube yimfihlo. Izindonga zengilazi ezihambayo zingenisa ngaphandle. Izakhiwo ezigciniwe ezimaphakathi ne-mod w/ukhonkolo phansi, amatshe astakiwe kanye neposi/ugongolo. Izibuyekezo zifaka ikhishi/izindawo zokugeza ezintsha, i-Wi-Fi, izikrini eziyisicaba ezi-4. I-BR 1 w/indlovukazi, indawo yokuhlala, ukufinyelela echibini. BR 2 w/2 kabili, BR 3 w/indlovukazi. 2 okugeza okugcwele. Izinja-friendly. Eduze kwesifunda samabhizinisi, i-Buzz & PS trolley yamahhala.
I-retro vibe enhle kakhulu nazo zonke izinsiza zesimanje. Indawo yangaphandle yokubukwa kwe-w/mtn, ichibi elishisayo eline-spa yempophoma ehlanganisiwe, izindawo zokuhlala eziningi/zokudlela, isici somlilo, ikhishi elingaphandle. Kufakwe isango futhi kubiyelwe ngodonga ukuze kube yimfihlo. Izindonga zengilazi ezihamba…
I-Terrace, I-TV, umbhede we-queen
Ubhavu wamanzi ashisayo wakho wedwa
Le ndawo iseTahquitz River Estates phakathi kweDowntown ephithizelayo kanye neSifunda Sebhizinisi saseSouth Palm Springs. Ama-nightclub, amabha, izindawo zokudlela, ama-burger joints, izitolo zamasemishi, nezindawo zokusebenza konke kungaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo.
Ibanga ukusuka e- Palm Springs International Airport
Imizuzu engu-4 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni